महिला हिंसाका अपराधी संरक्षणमा स्थानिय जनप्रतिनिधीको अस्वभाविक सक्रियता - Nepal Post Daily
महिला हिंसाका अपराधी संरक्षणमा स्थानिय जनप्रतिनिधीको अस्वभाविक सक्रियता
प्रदेश २ मा महिला हिंसाका घटनाहरु बढे !
बीरगन्ज, २१ असाेज । पछिल्लो समय महिलाहरु उपर हुने हिंसाका घटनाहरु ह्वात्तै बढेका छन् । विभिन्न निहुँमा महिलाहरु माथि हुनेका हिंसाका घटनाहरुमा महिलाहरुको ज्यान समेत जाने गरेको छ ।
छोरा नपाएको, विवाहमा दाईजो नल्याएको तथा कथित बोक्सीलगायतका आरोपमा महिलाहरु उपर हिंसाका घटनाहरु हुने गरेका छन् । त्यस्तै बहुविवाह, बोक्सी, छुवाछुतलगायतका सामाजिक कुसंस्कारहरुले पनि महिला हिंसाका घटनाहरुलाई बढावा दिईरहेका छन् । तर, यस्ता सामाजिक कुरितीहरुको जालो तोड्न भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यौनजन्य र घरेलु हिंसाका घटनामा स्थानिय सरकारका प्रतिनिधीहरुकै मिलेमतोमा घटना दबाउने तथा मिलापत्र गर्ने प्रवृतिले पनि ठाउँ ठाउँमा हिंसाका घटनाहरुलाई प्रश्रय दिईरहेको छ । कतिपय घटनाहरुमा हिंसा सहन नसकेर महिलाहरुले आत्महत्याको बाटो पनि राज्ने गरेको खबर छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७५/७६ सम्म महिला हिंसाका करिब ४४ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए । बलात्कार तथा बाल यौन दुराचारका घटनाहरुलाई पनि सामेला गर्ने हो भने महिला तथा बालबालिका उपर भएका घटनाहरुको संख्या ५० हजारभन्दा अधिक छ । यी प्रतिनिधी घटनाहरु मात्र हुन् । यस्ता अन्य थुप्रै घटनाहरु छन्, जुन प्रहरीमा पुग्नु अगावै स्थानिय तहमै मिलापत्र गरिन्छ ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार हिंसाजन्य कुसंस्कार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा व्याप्त छ । आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ देखि २०७५ ७६ सम्म अर्थात तीन आर्थिक वर्षमा महिला तथा बालबालिका माथि भएका कुल ५० हजार ५ सय ५१ घटनाहरु मध्ये प्रदेश २ मा मात्रै २६ दशमलव १२ प्रतिशत घटनाहरु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । प्रदेश २ मा घरेलु हिंसा, दाईजो, बहुविवाह, छुवाछुत, बोक्सीलगायत अपराधहरुका १३ हजार ५ सय ५१ घटना भएका छन् ।
कतिपय उजुरी दबाब र प्रलोभनमा पारि गुपचुपमा मिलाईँदा प्रहरीमा पुग्न सकेका हुँदैनन् । यसरी महिला उपर भईरहेका घटनाहरु आपसमा निमिट्यान्न पार्न स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुको अनावश्यक सक्रियता हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो पटक साउन २ गते पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा एक १५ वर्षिय युवतीको बलात्कार भयो । घटना प्रहरी सम्म पुग्यो । तर, उक्त घटनालाई दबाउन तथा आपसी स्तरमा मिलाउन स्थानिय जनप्रतिनिधीकै संलग्नता देखियो । बलात्कार गर्नेहरु मध्ये एक जना गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाँका भान्जा रहेको पिडित युवतीले प्रहरी समक्ष बयान दिएकी थिईन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मियाँका भाञ्जा नुरआलमले आफ्नै गाउँकी १५ वर्षिय युवतीलाई बलात्कार गरि भागेका थिए । पीडित किशोरीका काका असलम मियाँमाथि हातपात गरेर गाउँमै घटनालाई साम्य पार्न जालिम मियाँले दिनभर आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरिरहे । पटेर्वा सुगौलीका प्रहरी निरीक्षक दिपक चोरवारलाई बोलाएर घटनालाई पञ्चायतीका माध्यमले दबाउन खोजिएपनि व्यापक जनदबाब पछि घटनाको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष मियाँले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको दम्भ देखाउँदै घटनालाइ साम्य पार्ने सबै शक्ति संयन्त्र परिचालन गरि स्थानिय प्रशासन उपर दबाब सृजना गरि पक्राउ परेका अभियुक्तलाइ हिरासतमुक्त गर्न लगाए ।
यस्ता हिंसाका घटनाहरुलाई निरुत्साहन गर्न तथा दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सक्रिय हुनुपर्ने जनप्रतिनिधीहरु घटना मिलाउन र अभियुक्त उम्काउन लागिपर्नु लज्जास्पद विषय हो । पर्सामा हुने महिला हिंसाका घटनाहरुमध्ये अधिकांश घटनाहरु दबाउन सुरुमा दबाउन खोजिने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । कतिपय महिला हिंसाका घटनाहरू सुरूमा प्रहरी दर्ता पनि गर्न नमान्ने गरेकाे खबर छ ।
गत २०७७ जेष्ठ ७ गते पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा एक २२ वर्षिय युवती सुनरी देवि घरेलु हिंसाको शिकार बनिन् । दाईजोमा केही नल्याएको भन्दै उनका ससुराली उनको शरिरमा दियोको तेल खन्याएर घाईते बनाईदिए । घाईते सुनरी देविलाई उद्धार गरेर प्रहरीले नारायणी पठायो । नारायणीमा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई काठमाण्डौ रेफर गरियो । गम्भीर अवस्थामा रहेकी उनको गत जेष्ठ २१ गते मृत्यु भयो । हाल सुनरी देविको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ भने उनका ससुरा र श्रीमान पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । पिडितको पक्षबाट हाल यो मुद्दा सामाजिक संस्था सानो पाइलाले लडिरहेको छ । मिलापत्र नहोस् र दोषीलाई कडा कारवाही होस् भन्दै यो मुद्दा पिडितको पक्षबाट आफुहरुले लडिरहेको सानो पाइलाका भाजु पटेलले बताए ।
केही वर्षयता प्रदेश र स्थानिय सरकारले महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि कार्यक्रमहरु ल्याएपनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । कानुनले अपराध मानेका विसंगती, विकृति र कृरीति अन्त्य गर्न जनचेतना नै फैलाउनुपर्ने समाजिक कार्यकर्ताहरुको भनाई छ । अपराध र भोटको राजनितीलाई नेताहरुले अलग अलग रुपमा नहेरेसम्म विसंगीत र कुरीतिबाट हुने महिला हिंसाका घटना अन्तय नहुने सामाजिक कार्यकर्ता जय साहले बताए ।
प्रतिनिधीसभा राज्य व्यवस्था समितीमा बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा स्वयंमले महिला हिंसाका अपराध मिलापत्र र गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । तर, यस्ता घटना हुनै नदिन, अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा ठोस कदम के चाल्न सकिन्छ, पिडितलाई न्याय कसरी गर्न सकिन्छ, अपराधी विरुद्ध शुन्य सहनशिल कसरी बन्न सकिन्छलगायतका विषयमा गृहमन्त्री र महानिरीक्षकले कुनै योजना साझा गरेनन् ।
यौनजन्य घटनामा पिडितलाई न्याय दिलाउन तत्पर हुनुपर्नेमा उल्टै पिडितलाई थप आहात पुग्ने गरि गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटनामा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु लज्जास्पद रहेको महिला अधिकरकर्मी शैली चौधरीले बताइन् ।
सरकारमा रहेकाहरुबाट बेलाबेलामा यस्ता गैर जिम्मेवारीपुर्व अभिव्यक्ति आईरहनुले सरकारी तवरबाटै अपराधीहरुको संरक्षण त भईरहेको छैन ? भन्ने भान आफुलाई हुने गरेको अधिकारकर्मी चौधरीको भनाई छ ।
“निर्मला हत्याकाण्ड पछि वर्तमान गृहमन्त्रीले बलात्कार पुँजीवादले गराएको अभिव्यक्ति दिए । सांसद रामनारायण बिडारीले ९० प्रतिशत बलात्कारका घटनामा महिलाले ईन्जोय गरेको भन्छन् । दिनमा ७ जति मात्र बलात्कार चिन्ता लिने अवस्था होईन गृहमन्त्रीले थापाले नै भनेका हुन् ।”, शैली भन्छिन्, “उहाँहरुको अभिव्यक्तिले उहाँहरु महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न तल्लीन हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।”
यता प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले वर्षौदेखि सामाजिक विभेद र कुसंस्कार एकैपटक हटाउन नसकेपनि केही नितीगत निर्णय गरेर आधार खडा गर्ने क्रममा रहेको जानकारी गराए । वर्षौदेखि जकडिएको सामाजिक विभेद र सार्वजनिक सेवामा लक्षित वर्गको सहभागिता र पहुँच हुन नसक्दा लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुने गरेको बताए । उनले सबै प्रदेश र स्थानिय सरकारले हिंसाजन्य अपराधविरुद्ध साझा रणनिती बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए । हिंसाजन्य अपराधमा राजनितीक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बेटि बचाउ, बेटि पढाउ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वकाे सरकारकाे सुरूवाती कार्यक्रमहरू मध्ये एक हुन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलाे छ ।
यसैबिच राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्यांकले पनि लकडाउनको दुई महिनामा महिला हिंसा वृद्धि भएको देखाएको छ । योगको हेल्पलाइनमा चैत ११ देखि जेठ १० सम्म १ हजार ३ सय ६१ वटा फोन आएका थिए । जसमध्ये ६०४ महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन् । आयोगका अनुसार मानसिक हिंसा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । लकडाउनअघि दुई महिनामा ३८ प्रतिशत थियो भने लकडाउनमा ५४ प्रतिशत पुगेको छ । शारीरिक हिंसा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअघि २३ प्रतिशत थियो भने लकडाउनमा २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी यौनिक हिंसा २ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
Previous articleशिवम् ह्याचरीको बदमासी, स्थानिय आन्दोलित, दुर्गन्धले जनजीवन प्रभावित
Next articleलागुऔषधसहित दुईजना पक्राउ